DOWNLOAD REALTEK NGWA NGWA ỌKWỌ ỤGBỌALA - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Download ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala ọma maka Realtek
Njikwa faili bụ ihe dị mkpa nke kọmputa ọ bụla. Ekele ya, onye ọrụ ahụ na-agagharị n'etiti faịlụ na nchekwa dị na diski ike, ma na-eme ọtụtụ omume na ha. Mana arụmọrụ nke Windows Explorer anaghị ejupụta ọtụtụ ndị ọrụ. Iji jiri atụmatụ ndị ọzọ, ha wụnye ndị njikwa faịlụ ndị ọzọ, onye ndú na-ewu ewu n'etiti nke ọchịagha niile.
The shareware program Total Commander bụ onye nchịkwa faịlụ nke zuru ụwa ọnụ nke Onye Mmepụta Switzerland bụ Christian Giesler. Na mbido, usoro ihe omume a bụ otu okwu nke onye njikwa faịlụ a ma ama maka MS DOS nhazi usoro Norton, mana ọ ga - arụ ọrụ nke ọma na onye bu ya ụzọ.
Ihe omumu: Otu esi eji ndi ochi
Ihe omumu: Otu esi wepu ihe nchedo n'ime onu ogugu
Ihe nkuzi: Otu esi kpochapụ njehie "iwu PORT dara" na Total Commander
Ihe Ọmụmụ: Otu esi arụ ọrụ na plugins na Total Commander
Dịka onye ọ bụla njikwa faili, ọrụ kachasị nke Ọchịchị Kasịnụ bụ ịnyagharịa site na ndekọ aha nke diski diski kọmputa, na site na mgbasa ozi ndị nwere ike iwepụ (disks disks, draịva siri ike, disks compacts, drafts USB, etc.). Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịnwe njikọ netwọk, ịnwere ike iji Onye Ọchịchị Kasịnụ na-ebugharị netwọk mpaghara.
Ntughari nke igodo di n'eziokwu na i nwere ike na-arụ ọrụ n'otu oge. Maka mfe igodo, ọ ga-ekwe omume ịhazi ọdịdị nke ogwe ọ bụla dị ka o kwere mee. Ị nwere ike ịhazi faịlụ na ha n'ụdị ndepụta ma ọ bụ jiri ụdị nke thumbnails arụ ọrụ na ihe ngosi nke mbido. O nwekwara ike iji ụdị osisi ahụ mgbe ị na-ewu faịlụ na akwụkwọ ndekọ.
Onye ọrụ ahụ nwekwara ike ịhọrọ ozi gbasara faịlụ na akwụkwọ ndekọ ọ chọrọ ịhụ na windo: aha, ụdị faịlụ, nha, ụbọchị okike, àgwà.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta Ịntanetị, iji Total Commander ị nwere ike izipu ma nata faịlụ site na FTP. Ya mere, ọ dị nnọọ mfe, dịka ọmụmaatụ, iji bulite faịlụ na nchịkọta. Onye na-akwado FTP na-akwado teknụzụ SSL / TLS, yana nbudata faịlụ, na ike ibudata n'ọtụtụ iyi.
Tụkwasị na nke ahụ, usoro ihe omume a nwere njikwa njikọ FTP dị mma n'ime ya, nke ị nwere ike ịchekwa nzere ka ị ghara ịbanye ha oge ọ bụla i jikọtara na netwọk ahụ.
Omume na faịlụ na nchekwa
Dịka ọ bụla na njikwa faili ọ bụla, na Onye Ọchịchị Kasịnụ, ị nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche na faịlụ na nchekwa: hichaa ha, detuo, kwagharịa, nyegharia, gụnyere gbanwee ndọtị, mgbanwe àgwà, kewaa n'ime akụkụ.
Imirikiti omume ndị a nwere ike tinye na ọ bụghị naanị faịlụ na nchekwa dị iche iche, kamakwa ha niile n'otu oge ahụ, jikọtara aha ma ọ bụ ndọtị.
Enwere ike ime ihe site na iji menu kachasị na "faịlụ", na-eji "igodo ọkụ" dị na ala nke usoro ihe omume ahụ, nakwa dị ka iji ọdịnaya menu Windows. Ị nwere ike ịme ihe site na iji obere ụzọ keyboard. Tụkwasị na nke ahụ, Onye Ọchịchị Kasịnụ, mgbe ị na-akpụgharị faịlụ, nwere ike iji ụzụ ịdọrọ-na-dobe.
Usoro ihe omume ahụ nwere ihe nchekwa ederede nke nwere ike ịmebe ebe nchekwa na ZIP, RAR, ARJ, LHA, UC2, TAR, GZ, ACE, TGZ. Ọ nwekwara ike ịdebe faịlụ gaa na ZIP, TAR, GZ, Archive TGZ, ma, ọ bụrụ na ejikọrọ ya na ndị ọkwá na-achịkwa ndị ọzọ na-achịkwa, debe ya na RAR, ACE, ARJ, LHA, UC2, gụnyere ịmepụta ọtụtụ mpịakọta.
Usoro ihe omume ahụ nwere ike ịkwado ọrụ na ebe nchekwa na otu ụdị ahụ dị ka akwụkwọ ndekọ.
Onye na-ekiri ihe
Nchịkọta Ọchịchị Niile nwere onye nkwalite-arụ ọrụ (lister), nke na-enye nlele nke faịlụ na ntinye yana nha na ọnụọgụ abụọ, hexadecimal, na ụdị ederede.
Ọchịchị Nchịkọta na-enye ụdị nchịkọta faịlụ faịlụ dị mfe, nke ị nwere ike ịkọwa oge okike nke ihe achọrọ, aha ya n'ozuzu ya ma ọ bụ akụkụ ya, àgwà, ọchụchọ ya, wdg.
Ihe omume ahụ nwekwara ike ịchọ n'ime faịlụ na n'ime ebe nchekwa.
Ọtụtụ nkwụnye plug-ins jikọtara na Ọchịchị Kasịnụ nwere ike ịbawanye ọrụ ya dị ukwuu, na-eme ka ọ ghọọ ngwakọta dị ike maka nhazi faịlụ na nchekwa.
N'etiti ndị isi nke plugins ejiri Total Total, ịkwesịrị ịmepụta ihe ndị a: nkwụnye ins maka archiving, maka ịlele ụdị faịlụ dị iche iche, maka inweta akụkụ zoro ezo nke usoro faịlụ ahụ, nkwụnye ihe ọmụma, maka nyocha ngwa ngwa.
Uru nke ọchịagha niile
E nwere okwu Russia;
Nnukwu ọrụ dị ukwuu;
Iji ụzụ ịdọrọ-na-dobe;
Mgbatị ọrụ na plugins.
Ọghọm nke Onye Ọchịchị Niile
Ọchịchọ na-agbanwe agbanwe mgbe nile nke nsụgharị na-edeghị aha iji kwụọ ụgwọ maka ya;
Na-akwado ọrụ na PC nanị na sistemụ arụmọrụ Windows.
Dịka ị pụrụ ịhụ, Ọchịchị Kasịnụ bụ onye njikwa faili njikwa iji mezuo mkpa nke ọ bụla onye ọrụ ọ bụla. A pụrụ ịgbatị mmemme nke usoro ihe a ọbụna karịa site n'enyemaka nke plug-ins na-emelite mgbe nile.
Download ikpe version of Total Commander